Ejiji | Ka 2022
Naanị ihe ịchọ mma: onye mmebe Jennifer Fisher na aghụghọ iji dobe ọla, ngwugwu ngwa, na ịtụgharị anya gị site n'ụbọchị ruo abalị.
2022 | ẸNam Ekese Paul Adams | Atiya: Ejiji
N'ime mbipụta nke Just Jewelry, anyị na -aga n'azụ ihe nkiri akara stylist nke mbụ, nke ọ sịrị na ọ malitere 'na mberede.'
Na -atụ anya na mmefu ego
Ola diamond nwere ike ịbụ ezigbo enyi nwa agbọghọ, mana akara ọnụahịa nke na-abịa na ndị ahụ na-eme mkpọtụ nwere ọtụtụ ihe egwu dị egwu.
Otu puku mgbaghara maka igbu oge
Enwere obere ihe mberede ụlọ. Ọ baghị uru ịkọwa nke ọma, mana ọ metụtara onye a na ụzọ ya na -awagharị awagharị. Ọ BỤLA, ọ dị ọhụrụ na ọrụ nnapụta anụ ụlọ m, mmụọ ezumike juru m anya. Eleghi anya ọ bụ n'ihi na m na -atụ anya njem njem kwa afọ na LA na Tọzdee, na m na -aga n'ihu nke ukwuu karịa ka ọ dị na mbụ, mana ihe niile ọ dị m ka m na -ahụ n'etiti ndị ibe m ndị Parisi nabatara bụ ihe ịchọ mma ekeresimesi na obere ezinụlọ mara mma na -aga. ụbọchị. N'ịtụkwasị okpu onye na-amụ gbasara mmadụ na-amateur na-adịghị mma, aghaghị m ịjụ onwe m, ezinụlọ ndị a ọ dị iche? Mmụọ ezumike ha ọ dị iche na nke anyị? Dabere na ebe ị na -aga. Maka ndị nke na -echeta Maya (nwa m nwanyị dị afọ iri nke hụrụ n'anya), ọ bi na mpaghara hipster dị ukwuu na Marais, na mpaghara 3. Nke a bụ ihe ekeresimesi na ngalaba ịsa ahụ ya na Paris dị. Nna na -ewu ewu bụ n'ezie ihe atụ nke ịzụ ụmụ na -ege ntị, na -eji nwa iwe ya dị afọ abụọ na -agba ịnyịnya. Apụghị m ịkwụsị ilele ha, na n'etiti ọtụtụ echiche m nwere, otu ihe metụtara ejiji bụ nke a: kedu ihe nne na nna na-ewu ewu na-adị mgbe anyị bụ ụmụaka? Ndị mụrụ m dị egwu
Echiche Onyinye ezumike 100 mara mma maka onye ọ bụla nọ na listi gị
Anyị achịkọtala onyinye ezumike kacha atọ ụtọ, kacha mma, kacha atọ ụtọ, kacha mma na ọmarịcha onyinye ezumike n'ahịa. Ka anyị malite inye!
A kaboodu dum na-eme: ya mere cathartic!
Na ngwụcha izu gara aga, egwu igwe nke na-ebuli shelf isii nke kọbọd m na hangbar dị mita isii n'ogologo uwe wepụrụ onwe ya na mgbidi m. Ọ bụ ụdị chi ndị ahụ na -achọ ịgwa m ihe? Obi dị m ụtọ, ọ dịla anya m gafeela maka idezi uwe. A na m abịaru nso ihe egwu a dị ka anyị na -eme na Glamour - jiri anya na -adịghị ahụ anya, nke siri ike na enyi ma ọ bụ abụọ. Ana m akwado nke ukwuu ịrịọ enyemaka nke onye ibe gị tụkwasịrị obi, onye na -adịchaghị enwe ike inwe agụụ nostalgia maka, sịnụ, uwe mwụda polyester ị yi na Halloween, 1996. Etinyere m ego m kacha mma n'ụlọ ahịa mbufe ahịa Ina na Tokio 7 - ọ bụ ụzọ dị mma iji nweta ego maka 431 ụzọ abụọ ahụ ọkụ jenerato site n'oge gara aga. Kedu ka unu si eme ihe gbasara iju mmiri?
Okwu 5 ma ọ bụ obere: George Lucas Na -agwa Dakota Fanning ____ Ahịrị n'ihu na Rodarte.
Ọ dị mma, lee ahịrịokwu m echetụbeghị na m ga -etinye n'ọrụ m dị ka onye na -ede akwụkwọ ejiji: George Lucas nọdụrụ n'ahịrị n'ihu na ihe nkiri Rodarte ụnyaahụ. Ee, onye nduzi Star Wars. Oh na um, otu ahụ ka Dakota Fanning mere. Ntre nso ke mmọ mbiba ẹneme? Nke ahụ, ndị m hụrụ n'anya, dịịrị echiche gị ...
Ọdịdị Kachasị Mma kwesịrị ịnwale: Uwe a na-adịkarị mma mana ọ na-eyi uwe mwụda na-ekpo ọkụ na mberede
Tinyere pastel wearable na oxfords emelitere, ọmarịcha uwe mwụda nọ na -aga n'okporo ụzọ mmiri nke oge opupu ihe ubi 2014. Mana ọ bụghị naanị ihe na-ewu ewu n'oge a-uwe mwụda mara mma bụ ezigbo kpochapụwo-pịa ebe ihe ngosi ndị a akara ngosi.
Ihe ngosi foto mkpuchi Emma Stone
Ikwu na Emma Stone na -agba ọkụ bụ okwu ekwesighi. Nwanyị ahụ dị naanị 22, na ọ nọ na fim anọ n'afọ a (yana afọ na-abịa The Amazing Spider-Man) ma yiekwa ka ọ na-enwu enwu dị ka achaisi ma ọ bụ ọbara ọbara.
$ 50 & N'okpuru: Nkwupụta Ọrụ Ọha
Maka ụmụ nwanyị niile, dị ka mụ onwe m, ndị na-enweghị ike ịnagide eriri ma tụgharịa gaa na uwe mwụda nwata iji zere VPL: Ị na-emeri ebumnuche ahụ ma ọ bụrụ na mmeghe ụkwụ gị siri ike nke na ha na-afanye apata ụkwụ gị ka boa constrictor na-eme. nke gerbil. Anyị niile nwere ike ịhụ nke ahụ… ọ na -adịkwa ka ọ na -egbu mgbu. (Ana m agwa gị okwu, nwanyị nọ n'ụzọ ụzọ ụgbọ oloko taa.) Ọ ka mma? Otu ụzọ dị fechaa nke nwere ụkwụ sara mbara mara mma nke ejiri eriri na -agbatị agbatị, dị ka ndị a mara mma. Agụ agụ nwa pink dị mkpụmkpụ, $ 4.50, dị na wetseal.com
Alert nwoke-swiiti! Ụdị nwoke kacha ewu ewu site n'izu Ejiji New York, Fall 2012
Izu Ejiji abụghị naanị maka ụmụ agbọghọ! Anyị na-akụda azụ azụ na ụyọkọ nke akwa ejiji ejiji nke New York na-egosi iji wetara gị ihe ngosi ụfọdụ nke ụdị nwoke kachasị mma gburugburu. Nwee obi ụtọ!
Jane Birkin & Lou Doillon: Ezinụlọ ọgbara ọhụrụ
Onye akụkọ mgbe ochie Britain na onye na -agụ egwú Jane Birkin (ee, a na -akpọ aha akpa Birkin maka ya) na nwa ya nwanyị Lou Doillon, onye France na -eme ihe nkiri, na -eme ka ihe niile ha yi dị mma. Banye n'ime ụwa ha dị mfe, nke mara mma. -Foto nke Bruce Weber sere
Ụdị ejiji kachasị mma iri nke afọ iri gara aga
Ee e, ụdị ejiji nke afọ iri a abụghị naanị maka ohere sara mbara dịka ndị mmadụ buru n'amụma, mana o doro anya na ọ na-apụ apụ mgbe ụfọdụ! N'ebe a, nchịkọta nke ụdị ejiji kachasị ukwuu na nke kachasị mma site na 2000 ruo 2010-ị maara na ị hụrụ ha n'anya!
Ugboro ole ka ị na -emelite drawer gị?
A bịa na bras, anụrụ m na ị ga -atụpụ ha ka ọnwa ole na ole gachara, ọ bụkwa otu ihe ahụ maka ụmụnwanyị. Ogologo oge ole ka ha ga-adị dabere n'otú ị si asacha ha (aka ma ọ bụ na igwe) ma ọ bụrụ na ị ga-akpọnwụ ma ọ bụ tụba ha na igwe nkụ, mana m na-asacha aka m ma kpaa uwe m? Mba Mba anaghị m. Yabụ, ekwesighi ịsị na m ga -emelite oge niile mara mma. Ma a bịa na 'lingerie' m (dị ka ọ na-acha ọbara ọbara ma ọ bụ pink ma ọ bụ hụ site na ojii), ka anyị kwuo na ọ bụ adịghị adị, yabụ ... enwere nke ahụ. Isi mmalite: more-more.tumblr.com site na Ahụ ime ime na Pinterest Kedu maka gị ụmụnwaanyị? Ị na -azụta uwe ime? Kedu ugboro ole? Kwa ọnwa ole na ole? Naanị n'oge pụrụ iche? Kedu ihe ị na -azụkarị? Enwere m mmasị wee tie ihe na efere!
Mmekọrịta Facebook: Banye iji nweta iko ugogbe anya anwụ Karen Walker!
Izu ọzọ, ohere ọzọ ịbanye maka ohere iji merie ihe na -atọ ụtọ na ibe Facebook Glamour! Ka ọ dị ugbu a, ị kwesịrị ịmara na anyị nwere mmasị ịnwe gị dị ka ndị na-akwado anyị na-eguzosi ike n'ihe, ugbu a ị na-enwetakwa ụgwọ ọrụ maka ya, ekele maka saịtị e-commerce Les Nouvelles.
Ihe na-acha uhie uhie na-eyi egwu anaghị eme oge niile
Lelee ụdị onyinye kwesịrị nsọpụrụ na ihe ndị mara mma anyị agaghị echefu echefu.
Enwetara m aka na Jared Leto n'abalị ụnyaahụ
Ọ bụrụ na ị merela agadi ebe ọ bụla na nso 90s wee jupụta na angst ime obodo na Doc Martens na ịhụnanya na-enweghị atụ na nne na nna na-eme ihere, ọ nwere ike bụrụ na ị nwere nkụda mmụọ na Jordan Catalano site na ndụ m akpọrọ. Enweghị m ihe ọ bụla, ọ bụ ezie na mgbe o jidere aka m n'abalị ụnyaahụ, aghọrọ m 14 ma gbazee ozugbo ...
Monaco Blue na -achọ ịghọ agba ọhụrụ kachasị amasị gị!
Chefuo agba iri ise nke isi awọ-Monaco Blue ga-abụ agba ị nweghị ike ịkwụsị ikwu maka oge opupu ihe ubi a.
Mkpa Denim ise
Ntuziaka maka ụdị jean ise kachasị elu.
Ihe ị ga -eyi na ụbọchị Valentine n'agbanyeghị koodu uwe
Ma ị na -aga ụbọchị ihunanya ma ọ bụ na -eso ndị ezigbo enyi gị na -a drinkingụ ọtụtụ whiskey, nke a bụ echiche ụdị 10 ga -ezu obi gị.
6 Uwe elu Jenny Packham dị ebube - dabara maka adaeze!
N'ime afọ gara aga, onye nrụpụta Britain Jenny Packham ghọrọ aha ezinụlọ na mberede mgbe Duchess nke Cambridge Kate Middleton bidoro iyi uwe ya ebe niile! N'ụtụtụ a, Jenny Packham gosipụtara nchịkọta ọdịda ya na 2012 na New York's Mercedes Benz Fashion Week. Lee akwa m isii kacha amasị m site na ihe nkiri a - ha mara mma nke ukwuu. Kedu ndị ị chere HRH Kate ga -eyi?
ntutu ntutu maka ntutu isi
ndò nke chaatị agba agba ntutu
t -shirts dị larịị maka ụmụ nwanyị